इमेज साप्ताहिक : 2019-09-01
नुवाकोटमा पुनर्निमाण र जिविकोपार्जनको पुनस्र्थापना
विदुर/पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नं. १ आँपचौरका सानुकान्छी राईलाई ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र अभिभावक जत्तिकै भरपर्दो भएर देखापर्यो । २०७२ सालको भुईचालोले आफ्नो घर ध्वस्त भएपछि कसरी घर बनाउने र चार जनाको टाउको लुकाउने भन्ने यिनको पिरलोको जिम्मा लियो केन्द्रले ।
यही गाउँका नरबहादुर राईलाई पनि घर बनाउनका लागि ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले गरेको भरथेग जीवनभरका लागि अमुल्य रहने भयो । यि सानुकान्छी र नरबहादुर राई जस्ता पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नं. १ का २ सय ५५ घरपरिवारले समयमै प्रकोप प्रतिरोधी घर पाएका छन् ।
सन् २०१५ को मे १ बाट २०१८ को डिसेम्वरसम्मका लागि नुवाकोटको तत्कालिन चार गाविसहरुमा पिछडिएका विपन्न बस्तीहरुका लागि जिविकोपार्जनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले सामुदायिक स्वावलम्बन अवधारणामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी रहेकै बेला विनाशकारी भुईचालो गयो । त्यसपछि कार्यक्रमको स्वरुप परिर्वतन गरेर लागू भयो । ति साविकका नुवाकोटका गाविसहरुमा सुर्यमती, चौघडा, थानापती र सुनखानी थियो । ति चार गाविसहरु अहिले तीन वटा गाउँपालिकाको पाँच वटा वडाहरुमा परिमार्जन भएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य हितबहादुर तामाङले यस संस्थाले नुवाकोटका भुईचालोबाट पिडित भएका नागरिकहरुका लागि गरेको सहयोगको खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । तत्कालिन समयमा संघसंस्थाहरु काम गर्न सजिलो ठाउँमा मात्रै जाने अवस्थामा पनि ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले विकट र अप्ठ्यारो ठाउँमा काम गरेको तामाङले स्मरण गरे ।
ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले माल्टेजर इन्टरनेशनलको सहयोगमा यि वडाहरुमा आयआर्जन समुहको माध्यामबाट विपद् न्यूनीकरणका लागि सामुदायिक सहयोग परियोजना कार्यान्वयन गर्यो ।
साविकको चौघडा गाविसको वडा नं. ४ आँपचौर गाउँमा ६ वटा आयाआर्जन समुहहरु गठन गरेर आफ्ना गतिविधि गर्दै आएको थियो । भुकम्प लगत्तै संस्थाले माल्टेजर इन्टरनेशनलको सहयोगमा जाडोयामका लागि आवश्यक लागुफाटा समुदायमा वितरण गर्यो । २०७२ साल फागुनतिर आँपचौरका घरविहिन पीडित नागरिकहरुको माग र सुझावका आधारमा संस्थाले घर निर्माण गरिदिने योजना अघि सार्यो र कार्यान्वयमै ल्यायो । ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रका कार्यक्रम प्रमुख शिबप्रसाद बस्याल भुइँचालो गएको तत्कालको समयमा सरकारले नागरिकलाई दिने भनेको रकम प्रदान गरेर सरकारको अभियानलाई संस्थाले नै अघि बढाएको बताउँछन् । अर्कै लक्ष्य बोकेर यो गाउँमा आएको संस्थाले भुईचालोबाट आक्रान्त बनेको नागरिकहरुलाई सहयोग पूगनेगरी कार्यक्रमको स्वरुपनै फेरेको छ ।
पिल्लर सहितको इट्टाको पर्खाल र छत ढलाल गरेको देखि सिमेन्ट ब्लकबाट तयार भई जस्ताको छानो लगाएको घरसम्म तयार भएको छ । त्यस्तै एक कोठे देखि चार भन्दा बढी कोठा भएको घर समेत संस्थाको सहयोगमा आपँचौरमा निर्माण भएको छ । तीन लाख रुपैयाँ देखि नौं लाख भन्दा बढी रुपैयाँसम्ममा यहाँ घरहरु निर्माण भएका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेका नागरिकहरुलाई ग्रामीण स्वावलम्वबन विकास केन्द्रेले उपलब्ध गराएको तीन लाख पनि घर निर्माणका लागि पर्याप्त भएको छ । आफ्नै केही आर्थिक हैसियत र साधन श्रोत हुनेहरुले भने संस्थाले उपलब्ध गराएको रकममा थपथाप गरेर घरमा केही सुविधा थपेका छन् । त्यसो त, संस्थाले सबै घरमा शौचालय पनि निर्माण गरेको छ । यो अवसर प्राप्त गर्ने नागरिकहरुमा पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नं. १ को आपँचौर, चपरा, फुँयालडाँडा, बाँनियाटारका नागरिकहरु छन् । प्रदेश नं. ३ का सांसद बद्री मैनालीले पिडामा परेका नागरिकहरुलाई खुसी दिने अभियानमा ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्र रहेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।
२५५ परिवारका लागि तयार भएको सबै घरहरु भुकम्पीय दृष्टिले सुरक्षित छन् । बनेका घरहरुको मोडल भने एकै किसिमको छैन । दुई सय भन्दा बढी घरहरुमा छड, सिमेन्ट र पक्की ईट्टाको प्रयोग भएको छ । बाँकी घरहरु सिमेन्टको ब्लकले गाह्रो र जस्ताको छाना लगाएर तयार भएको छ ।
त्यसो त, घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्न पनि नागरिकहरुलाई सहयोग चाहिने आवस्थाको सृजना भइसकेको छ । त्यही भएर घर पुनर्निर्माणसंगै जिविकोपार्जनको पुनस्र्थापना को अवधारणा संस्थाले ल्याएको छ । त्यस अनुसारको कार्यक्रममा स्थानीयहरुलाई संस्थाले सहभागी गराएको छ । अब यसलाई अगाडी बढाउन र नागरिकहरुको जीविकामा साथ दिन ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख डा. दुर्गाप्रसाद पौड्यालले स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
जिविकोपार्जनका कार्यक्रमहरु अन्र्तगत उमशीलता तालिम, सीप बिकास तालिम, जैविक मल, बाली भित्र्याउने तरिका, एकीकृत रोग–किरा व्यवस्थापन, बजारमुखी उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनको बारेमा समेत कृषकहरुलाई जानकारी प्रदान गरिएको छ । त्यसमा ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले सहयोग समेत पु¥याएको छ । विपद् अनुकुलन खेतीपातीको तालिम तथा सामाम्री वितरणका कार्यक्रमहरु समेत भएका छन् । त्यस्तै थोक व्यापारी तथा कर्जादाताहरुसंग छलफल पनि भएको छ । कृषि उत्पादन संकलन केन्द्र निर्माण एवं व्यवस्थापन, साना सिञ्चाई र माटो परीक्षणका कार्यक्रमहरु भएका छन् । यसरी ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले गाउँपालिकामा सञ्चालन गरेको कार्यक्रमहरु बहुपयोगी र प्रभावकारी देखिएको छ । स्थानीय सरकारका प्रमुखले समेत संस्थालाई आफ्नो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन् । भुईचालो पछि काम गर्न आएका अन्य थुप्रै संघसंस्थाको कार्यशैली र ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले गरेको काममा फरक रहेको पञ्चकन्या गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेजबहादुर तामाङले बताए ।
त्यस्तै महशुस भएको थियो पञ्चकन्या गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष मणिनाथ लामिछानेलाई पनि । भुईचालोपछि वडामा काम गर्न आएका संघसंस्था र परियोजनाहरुले नागरिकहरुलाई कम हित गरेको अनुभव गरेका वडा अध्यक्ष लामिछानेले यस संस्थाको प्रशंसा सार्वजनिक कार्यक्रमै गरेका छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुबाटै कार्यक्रमको अवधि लम्वाउन र परियोजना थप गर्न आग्रह भइरहेको छ । ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रलाई परियोजना सहयोग गरिरहेको माल्टेजर इन्टरनेशनलले पञ्चकन्या गाउँपालिकामा थप कार्यक्रम सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । भविष्यमा अन्य संस्थासंगको सहकार्यमा कार्यक्रम अगाडी बढाइने र भविष्यमा गर्ने कार्यक्रमको अध्ययन पिआरए भइरहेको माल्टेजर ईन्टरनेशनलका कन्ट्री ड्राइरेक्टर बिजयलाल श्रेष्ठले बताए ।
ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले समुदायमा विपद् अनुकुल कृषि प्रविधिको तालिम एवं क्षमता विकासको कार्यक्रम समेत गरेको छ । जस अन्र्तगत भुईचालोबाट पानीका मुल सुकेको ठाउँहरुमा पानी संकलन गर्ने प्लाष्टिकका पोखरीहरु तथा थोपा सिञ्चाई जस्ता पानीको व्यवस्थापन गर्ने प्रविधिको बारेमा सिकाईएको छ । बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने कृषकहरुलाई टनेल, ड्याङ छोप्ने प्रविधि सिकाईएको छ । त्यसका साथै ति प्रविधिका लागि आवश्यक औजार, विउविजन वितरण गरिएको छ । माटो परीक्षण गरेर उर्वरता बढाउने तालिम पनि प्रदान गरिएको छ ।
जिविकोपार्जनका कार्यक्रम अन्र्तगत नै एकीकृत रोग कीरा–व्यवस्थापनको पाटोमा समेत ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले समुदायमा काम गरेको छ । कृषि बालीहरुमा लाग्ने रोग कीराहरुलाई विषादीले नियन्त्रण गर्दा त्यसको नकारात्मक असर मानिस तथा पशु स्वास्थ्यमा पर्ने भएकोले कार्यक्रमले जैविक सामाग्रीको प्रयोगमा अग्रसर गराएको छ । रुदुवा पञ्चकल्याणी स्वावलम्बन कृषि सहकारी संस्था शिवपुरी–८ थानापतीका उपाध्यक्ष रामकुमार थापा ।
उद्यमशीलताको विकासमा आयाआर्जनका क्रियाकलापमा लागेका किसानहरु आफुसंग भएको साधन र क्षमताको आँकलन गरी त्यही अनुसारको जीविकोपार्जन कार्य गर्न उद्यमशीलताको तालिम समेत प्रदान गरेको छ । जसमा कृषि, पशुविकास, तरकारी तथा फलफुल खेती, करेसावारी जस्ता क्षेत्रहरुमा आफ्नो रुची, क्षमता, श्रोत–साधन, तरिका र विधिका बारेमा स्थानीयहरु जानकार भएका छन् । महाङ्कालेश्वरी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका कोषाध्यक्ष तेजकुमार श्रेष्ठ संस्थाले गरेको सहायताका कारण गदगद् छन् ।
ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले कृषकहरुलाई गुणस्तरीय उत्पादन एवं बजार ब्यवस्थापनको पाटोमा समेत सघाएको छ । उत्पादनको गुणस्तर कसरी बढाउने, बाली भित्र्याउदा कसरी कम क्षती गर्ने, सामाग्री कसरी भण्डारण गर्ने र बजारमा पु¥याउने भन्ने विषयमा पनि सचेतना बढेको छ ।
त्यसो त लक्षित वर्ग विपन्न एवं पछाडी परेको समुदायको कृषि उत्पादन संकलन गर्न व्यापारीहरु घरमै नजाने र बजारसंगको प्रतिस्पर्धामा ठगिदै आएका थिए । त्यसैले उनीहरुको हितका लागि समुदायको पायक पर्ने ठाउँमा संकलन केन्द्र तयार पारिएको छ । जहाँ समान राख्ने, नापतौल गर्ने सुविधा उपलब्ध रहेको छ । तीन वटा गाउँपालिकाको कार्यक्रम लागू भएको पाँच वटै वडामा संकलन केन्द्र स्थापना भई हाल सञ्चालनमा रहेको छ ।
यी बाहेक पाइप वितरण, प्लाष्टिकको पोखरी निर्माण, स्प्रिङ्ग कल, बाख्रा पालन, बोका वितरण, टनेल खेती, कुखुरा पालन तालिम, मौरी पालन तालिम र घार वितरण, आरन सुधार कार्यक्रम र आरनको सामाग्री हस्तान्तरण जस्ता कार्यक्रम पनि सञ्चालन भएको ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रका परियोजना सुपरभाइजर साधुराम सापकोटाले जानकारी दिए ।
लिखु, पञ्चकन्या र शिवपुरीमा ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले गरेको कार्यक्रममा कृषकहरु अधिकमात्रामा लाभान्वित भएका छन् । जसमा लिखुको वडा नं. ३ र ४ शिवपुरीको ७ र ८ र पञ्चकन्या गाउँपालिकाको वडा नं. १ रहेको छ । ति वडाहरुमा संस्थाले गठन गरेको समुहहरु सहकारीमा परिणत भएका छन् । लिखु गाउँपालिका वडा नं. ४ को १२ वटा समुह मिलेर एक, पञ्चकन्या वडा नं. १ का ११ वटा समुह मिलेर दुई वटा सहकारी गठन भएको छ । त्यस्तै शिवपुरी गाउँपालिका वडा नं. ७ मा ११ वटा समुहबाट एउटा सहकारी र वडा नं. ८ मा १२ वटा समुह मिलेर एउटा सहकारी स्थापना भएको छ । लिखु गाउँपालिकाको वडा नं. ३ मा रहेको १४ वटा समुहहरु भने कृषि सञ्जालमा आवद्ध भएका छन् । यसरी ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले ६० वटा कृषि समुह गठन गरेर त्यसलाई ६ वटा सहकारीमै रुपान्तरण गरिसकेको छ । यसरी कृषकको समुह तयार गरेर सहकारीसम्मको कल्पना साकार गर्ने परियोजना गाउँमा निरन्तर हुनुपर्ने तर्क रुदुवा पञ्चकल्याणी स्वावलम्बन कृषि सहकारी संस्था शिवपुरी–८ थानापतीका सचिव सरोज थपलियाको छ । उनी आफुजस्ता युवाहरुलाई कृषिमा जोडिराख्नका लागि यो संस्था र कार्यक्रमहरु आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
परियोजना अन्र्तगत नुवाकोटको तीन स्थानीय तहको पाँच वटा वडाहरुमा पाँच वटा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । जसमा आवास निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाई, विपद् व्यवस्थापन, जिविकोपार्जनका कार्यक्रम र स्वास्थ्य कार्यक्रम छन् । स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्र्तगत ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रलेले नुवाकोटको किस्पाङ्ग गाउँपालिका वडा नं. १ भाल्चे र ककनी गाउँपालिका वडा नंं १ ओखरपौवामा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरेको छ । आधारभुत स्वास्थ्य सेवा अन्र्तगत एक÷एक वटा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण भएको हो । त्यस्तै ६ वटा स्वास्थ्य चौकीहरुमा स्वास्थ्यसंग सम्वन्धित सामाग्रीहरु पनि वितरण भएका छन् ।
मानिसको स्वास्थ्य तथा दैनिकीसंग प्रत्यक्ष जोडिने खोनपानीको क्षेत्रमा समेत संस्थाले प्रशस्तै काम गरेको छ । परियोजना क्षेत्रका साविकका चार गाविसहरुमा भुईचालोबाट क्षतिग्रस्त १२ वटा खानेपानी आयोजनाहरु यही प्रियोजना अन्र्तगत निर्माण भएका छन् । सोही कार्यक्रममा ३२ वटा साना निर्माण कार्य र मर्मत भएको छ । त्यसमा ३ वटा फेरोसिमेन्ट, ट्याङ्की निर्माण भएको छ । त्यस्तै नौं वटा प्लाष्टिक ट्याङ्की जडान, ५ वटा इन्टेक निर्माण भएको छ । यो खानेपानीका साना ठुलो कार्यक्रमबाट ७ सय घरपरिवारका झण्डै ४ हजार नागरिकहरु लाभान्वित भएको ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रका फिल्ड प्राविधिक सन्तोष कोइरालले बताए ।
त्यस्तै, आयोजनाहरुमा उपभोक्ता समिति गठन गरी उनीहरुको काम, कर्तब्य तथा जिम्मेवारी अनि मर्मत सम्भारको तालिम समेत प्रदान गरिएको छ । सबै आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई उपभोक्ताहरुलाई ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रेले हस्तान्तरण समेत गरेको छ । भुईचालोबाट क्षतिग्रस्त पानीका मुहान ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले मर्मत पनि गरेको छ । पानी ट्याङ्कीहरु प्रकोप प्रतिरोधी समेत निर्माण भएको छ । पानीको परीक्षण मुहानदेखि घरको धाराधारासम्म गरिएको छ ।
ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले गरेको कार्यक्रको स्थानीय सरकारबाट सम्मान र कदर समेत भएको छ । क्षतिग्रसत गाउँ उठाउने सरकारको अभियानमा महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको भन्दै सहयोगी संस्था माल्टेजर इन्टरनेशनललाई समेत पञ्चकन्या गाउँपालिकाले कदर पत्र प्रदान गरेको छ ।
ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रले स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना समेत तयार गरेको छ । उक्त स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना लिखु, शिवपुरी र पञ्चकन्या गाउँपालिकामा कार्यान्वयमा आएको छ । भुईचालो, पहिरो, बाढी, चट्याङ तथा आगलागी जस्ता प्रकोपहरुको न्युनिकरणमा यो स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना प्रभावकारी मानिएको छ । यो स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना लिखु, शिवपुरी र पञ्चकन्या गाउँपालिकाको परियोजना लागू भएको ५ वटै वडामा कार्यान्वयमा आएको छ ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Thursday, September 05, 2019 No comments:
युनोप्सको हेलचेक्र्याई, ८०० घरधुरी लाभग्राही सूचीमै परेनन्
विदुर/भुकम्पपछि नुवाकोटको पुनिर्माण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन सञ्चालन भएको भारतिय परियोजनाकै कारण नुवाकोटमा ८ सय १३ घरधुनी लाभग्राही सूचीमै परेनन् । भुकम्प पछिको पुनर्निमाणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने राहत रकम लिनका लागि आवश्क प्रक्रृयामा छुटेका घरधनीहरूले अन्तिम समय पनि गुमाएका हुन् । नेपाल सरकराले भर्खरै वितेको आर्थिक वर्षको असार मसान्तलाई लाभग्राही सूचीमा रहनको लागि दावी गर्ने अन्तिम मिति तोकेको थियो ।
तर नुवाकोटका ८१३ घरधुरीहरू भने विभिन्न कारणले असार मसान्तसम्मपनि लाभग्राही सूचीमा नपरेको हो । यस मध्ये ३१५ जना लाभग्राहीहरूको परियोजनाको लापरबाहीकै कारणले नाम समावेश भएको छैन । यो संख्या भारतिय परियोजना सञ्चालन भइरहेको स्थानको मात्रै हो । योनोप्सले नुवाकोटका विभिन्न २० स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
२०७२ सालको भुकम्पका कारण आफ्नो निजी आवास गुमाएका नागरिकहरूका लागि काम गर्न भन्दै स्थापना भएको भारतिय परियोजना जिम्मा लिएको संस्थाले गैर जिम्मेवारीपूर्ण रुपमा काम गरेको पाइएको छ । भुकम्प प्रभावितहरूलाई सहजिकरण गर्न र पुनर्निमाण प्राधिकरणसम्म उनीहरूको पहुँच कायम गर्न सञ्चालन भएको परियोजनाले उनीहरू यसरी सूचीबाट हट्नै लाग्दा पनि आवश्यक सहयोग नगरेको पाइएको छ । असार मसान्तसम्ममा सूचीकृत हुनुपर्ने नागरिकहरूको विभिन्न १६ उप शिर्षकमा ८१३ जनालाई राखी युनोप्सले अनुदान प्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । १५ असार, २०७६ सम्ममा लाभग्राही सूचीमा पर्नका लागि काम भइरहेको जनाएको युनोप्सले त्यसको भोलिपल्ट यो विवरण (हे. तस्बिर) बुझाएको हो ।
दुई महिना अघि आयोजना कार्यान्वय इकाई विदुरलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सारंश
१६ उप शिर्षक अन्र्तगतका केही बुँदाहरूमा उल्लेख भएका विवरण अनुसार युनोप्सकै कारण सयौं नागरिकहरू लाभग्राही सूचीबाट छुटेको प्रष्ट भएको छ । समाचारश्रोतका अनुसार पाँच वटा र्शिषकमा राखिएको ३१५ जनाका युनोप्सले काम छलि रहेको प्रष्ट भएको छ । तस्बिरमा प्रस्तुत भएको कोलोमको दोश्रोमा उल्ल्ेख भएको सडकमा जग्गा परेर पकिलो किस्ताका लागि पनि सम्झौता गर्न नपाएका घरधुरीको संख्या ११ छ । त्यस्तै सातौं कोलोमा घर नभेटिएको भन्दै १९६ घरधुरीको संख्या उल्लेख गरिएको छ ।
आठौ कोलोममा आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै ३ जनालाई त्यसमा सूचिकृत गराएको छ । १२ औ. कोलोममा अनुदानका लागि सम्झौत ागर्न रुची नै नभएको संख्या ५८ राखिएको छ । त्यस्तै १५ औं कोलोममा जिम्मेवार वा घरमुली घरमा नभएको भनेर ४७ घरलाई राखिएको छ । ‘विशेष गरी यि घरहरू र सूचीमा नपर्ने कारण लेखिएको देख्दा चाही युनोप्सले काम होइन ठगी गर्यो भन्ने बुझिन्छ’ समाचार श्रोतले भन्छ– २३ हजार ८८ घरलाई सहयोग गर्ने भनेकोमा ८१३ घर त यही विभिन्न बहानामा छुटाइएको छ । त्यस मध्येपनि ३१५ घर त कुनै पनि कारणले छुट्ने देखियो ।’
सडकमा जग्गा पर्नेहरूको अन्यत्र पनि जमिन हुन सक्ने कुरालाई परियोजनाले खोजिनै गरेको छैन । १०२ जना भुमिहिन पनि रहने र ११ जनाको जग्गा सडकमा पर्ने जस्ता हास्यास्पद प्रतिवेदन आयोजना कार्यान्वय इकाईमा बुझाएको छ । १९६ जनाको त घरनै फेला नपरेको सहजती प्रतिवेदन युनोप्सले तयार पारेको छ । त्यस्तै, आवश्यक कागज नपुगेको भनेर तीन धरधुरीको कागज जिल्ला पठाएको छैन ।
जिम्मेवार व्यक्ति घरमा नभेटिएको, अनुदान लिन रुची नभएका जस्ता कार्यालयमा बसेर तयार गरिएको प्रतिवेदनका कारण नागरिकहरू अन्यायमा परेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । २३ हजार ८८ घरको संख्या पु¥याउनका लागि परियोजनाले यसरी नक्कली प्रतिवेदन तयार गरेको आरोप पनि लागेको छ । त्यस्तै कुन गाउँमा कुन समस्या कत्ति परिवार पर्यो भन्ने सही तथ्याङ्क पनि पेश भएको छैन । ‘अनुमान र हचुवाको भरमा तयार गरिएको प्रतिवेदन भएकोले यसरी खास खास कुरो नदेखिएको हो’ प्रतिवेदन पढेपछि एक जनप्रतिनिधिले भने ।
युनोप्सको काम निगरानी गर्नुस् : सिईओ ज्ञावाली
विदुर/भुकम्पपछि नुवाकोटको पुर्निमाण प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन सञ्चालन भएको भनिएको परियोजनाको बारेमा अहिले चौतर्फी प्रश्न उठेको छ । भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स) मार्फत् सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी नभएपछि औपचारिक कार्यक्रममै यसप्रति चासो बढ्न थालेको हो ।
८ भदौ, २०७६ मा नुवाकोट दरवार क्षेत्रमा आयोजित नुवाकोटको पुनर्निमाण सम्वन्धि कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिदेखि पुनर्निमाणको जिम्मेवारी लिएका मुख्य व्यक्ति सम्मले युनोप्सको बारेमा चर्चा गरे । विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले नुवाकोटमा २३ हजार ८८ घर निर्माणका लागि आएको परियोजनाको ‘मोडल’ परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञावालीलाई सम्वोधन गर्दै उनले पुनर्निमाणको बेला गइसकेपछि नक्सा बनाईदिन नुवाकोट आएको उक्त परियोजनाको कुनै अर्थ नरहेकोले यस परियोजनाको कार्यक्रम परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए । ‘धेरै ढिला गरेर नुवाकोट आयो, जत्तिबेला यो परियोजना आयो त्यत्तिबेला पुनर्निमाणको काम धेरै भइसकेको थियो, अब यसको प्रभावकारिता छैन, त्यसैले आर्थिक
रुपमा नागरिकहरूलाई सवल बनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्यो’, प्रमुख पण्डितले भने ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञावाली नुवाकोटमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ।
राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञावालीले यसको आवश्यकता र प्रभावकारीताको बारेमा जिल्लामै छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । उनले नेपाल सरकारसंग भएको सम्झौता अनुसारको काम भए÷नभएको जिल्लामानै समीक्षा गर्न सकिन र सम्झौता अनुसार काम नभएको भए लगाउन मिल्ने बताए । ‘जिल्ला समन्वय समितिले युनोप्सको काम र कार्यक्रमको बारेमा बोलाएर समीक्षा गर्न लगाउनुस्, यसको बारेमा धेरै जिज्ञासाहरू उठेका छन्’, प्रमुख ज्ञावलीले भने, ‘जिल्लाको आवश्यकता अनुसार उनीहरूको काम परिमार्जन गर्नुपर्ने छ वा सम्झौता भएकै काम पनि उनीहरूले गरिरहेको छैन भने छलफल गरेर काम लगाउनुहोस्, उनीहरूलाई हेर्नुहोस् ।’
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले जिल्लामा क्रियाशिल विभिन्न राष्ट्रि तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको कार्यक्रम, शैली र व्यवहारको बारेमा समीक्षा र छलफल आवश्यक भइसकेको बताए । जिल्लाबासीको जीवनशैली भड्किलो रुपमा परिर्वतन, आकर्षक तलवभत्ताको जागिरका लागि मात्रै गैससहरूको भुमिका रहेकोमा उनको चिन्ता छ । नागरिकहरूलाई दैनिक जीवनयापन तथा तोकिएको काममा गैससहरू सक्रिय छन् छैन अब खोजीगर्ने बेला भएको उनको भनाई छ । ‘एनजिओ÷आइएनजिओले खान, गाडी चढ्न र बढी तलव भत्ता लिन सिकाएकै हो, अब त्यत्तिले मात्रै हामीलाई पुग्ला त ?’ प्रमुख तामाङले भने– हाम्रा लागि काम गर्न भनेर आएका संस्थाहरूले गर्नुपर्ने जस्तै काम गरिरहेका होलान् त ? अब हामीले एक–एक खोज्नुपर्छ ।’
युनोप्सको परियोजना के हो?
विदुर/भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स) मार्फत् सञ्चालन गरेको कार्यक्रम नुवाकोटमा सुरु देखिनै विवादित बन्दै आएको छ ।
भारत सरकारले उक्त सहयोग युएनडिपी र युनोप्ससँगको साझेदारीमा नुवाकोटमा २३ हजार ८८ भुकम्पपीडित धरनीलाई र गोरखामा २९ हजार ९१२ भुकम्प पीडित घरधनी र सामाजिक प्राविधिक सहजीकरण अन्तर्गत अरबौं रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । १५ अरब रुपैयाँ खर्च हुने यो परियोजनाले नेपाललाई पाँच अरब ऋण लगाउने छ । १० अरब अनुदानमा र ५ अबर रुपैयाँ सहुलियत ब्याज दरमा भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई ऋण दिएको हो । नुवाकोट र गोरखामा बनेको ५० हजार घर बनाउने दाता सम्मेलनको घोषणा अनुसार भारतिय सरकारले यो काम गरिरहेको छ । नुवाकोटमा युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स) र गोरखामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) बाट काम हुँदैछ ।
परियोजनाले नुवाकोटमा १५ असार, २०७६ सम्म गरेको काम ।
नुवाकोटमा युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युनोप्स) र विल्डचेन्जले काम गरिरहेको छ । यिनीहरूको कार्यालय विदुरमा जिल्ला हुलाक कार्यालय अगाडी र सुखद पाहुना घर नजिकै छ । युनोप्स र विल्ड चेन्ज दुवै संस्थाका कर्मचारीहरू संयुक्त रुपमा कार्यालय र आवासमा रहँदै आएकोमा दुई हप्ता अघिबाट विभाजन भएका छन् । आन्तरिक कलहका कारण युनोप्स र विल्डचेन्जका कर्मचारीहरू अलग भएका हुन् । काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो कार्य क्षेत्रको अत्यान्त जरुरी कामलाई पन्छाएर यिनीहरू आफ्नै विवादमा फसेका छन् ।‘अघिल्लोरातसम्म मिलिजुली बसिरहेका थिए भोलीपल्ट विहानै के मारामार परेर सबै आफ्ना गुण्टा लिएर कार्यालयबाट बाहिर हिडे, अहिलेपनि यही कारण गर्नुपर्ने काम अघि सरेको छैन’ यस विषयमा जानकारी भएका एक जनाले भने । गाउँमा रहेका प्राविधिकहरूले अनुदानका लागि योग्य रहेको भनेर सिफारिस गरेको घर पनि यिनीहरूको कारण अड्किएको आरोप छ । युनोप्सको कार्यक्षेत्रमा अनुदान रकम लिन परियोजनाको सिफारिस आवश्यक छ । जसले लाभग्राही लाई झण्झट थपिएको छ ।
भारत सरकारको आफ्नै संरचना जिल्लामा नभएकोले परामर्शदाताको रुपमा छनोट भएका यि संस्था मार्फत् पुनर्निमाण भएको घरहरूको संख्या गन्ने, अवस्था हेर्ने कामका लागि परियोजना केन्द्रित छ । त्यसका साथै, घर निर्माणमा अप्ठ्यारो भोगिरहेका नागरिकलाई सहयोग गर्नका लागि पनि परियोजनाले बजेट ल्याएको छ ।
नुवाकोटमा २३ हजार ८८ घर निर्माणमा भारत सरकारले प्रति घर दुई लाख रुपैयाँ अनुदान सरकारलाई उपलब्ध गराउने छ । सरकारले नागरिकलाई तीन लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ प्रदान गरेपनि नुवाकोट र गोरखाको ५० हजार घर निर्माणमा भारत सरकराले प्रति घर दुई लाख रुपैयाँ सरकारलाई अनुदान र एक लाख रुपैयाँ ऋणमा उपलब्ध गराउने छ । घर निर्माण भइसकेपछि घरको संख्या गणना गर्दै सरकारलाई रकम हस्तान्तरण गर्ने बिधि र प्रक्रृया यो परियोजनामा छ । त्यस बाहेक बलियो घर बनाउने परामर्श, घरको नक्सा निर्माणमा पनि यो परियोजनाले नागरिकहरूलाई सघाउनु पर्नेछ ।
Posted by image weekly (इमेज साप्ताहिक) at Sunday, September 01, 2019 No comments:
नुवाकोटका २३ को अवस्था अझै अज्ञात
विदुर/झण्डै १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्धन्द्धको समयमा नुवाकोटबाट २३ जना वेपत्ता छन् । यो १७/१८ वर्षको अवधिमा वेपत्ता भएका परिवारमा भने फर्किआउने हो की भन्ने आशा जिवितै छ । यत्तिका समयसम्म नफर्किएकोले मृत्यु भइसकेको अनुमान गरेपनि आफ्नो परिवारको सदस्य फर्किआउनेमा भने प्रायः आशाबादी देखिएका हुन् ।
अन्तराष्ट्रिय वेपत्ता दिवसको अवसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी नुवाकोटले शmुवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा वेपत्ताका प
शसस्त्र द्धन्द्धको समयदेखि बेपत्ता भएका नागरिकहरूको नुवाकोट रेडक्रसले तयार पारेको सूची ।
रिवारहरूले भने सरकारले आफ्नो सदस्यको खोजीका लागि उत्तिसाह्रो वास्ता नगरेको बताए । जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले द्धन्द्धको समयमा पिडित भएको बहानामा गलत व्यक्तिहरूले राज्यसंग फाईदा असुलीरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले नक्कली द्धन्द्ध पिडितका कारण वास्तविक रुपमा समस्यामा परेकाहरूलाई राज्यले प्रभावकारी रुपमा हेर्न नसकेको बताए ।
नुवाकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैरेले राज्य परिवर्तनका लागि योगदान पु¥याउने कार्यमा रहेका द्धन्द्ध पिडितहरूलाई राज्यले बिशेष रुपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनले संघिय सरकारको तर्फबाट आफुले गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तर्फबाट हुने काममा वेपत्ताका परिवार प्राथमिकतामा पर्ने बताए ।
विदुर नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. ४ का अध्यक्ष टलकमान श्रेष्ठले तत्कालिन समयमा समाजलाई गतिदिने काममा लागेका व्यक्तिहरू द्धन्द्धको समयमा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट वेपत्ता पारिएको बताए । उनले वेपत्ता परिवारलाई स्थानीय सरकारले विशेष रुपमा हेर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइनु आवश्यक रहेको औल्याए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ महासंघ नुवाकोटका अध्यक्ष कपिलदेव खनालले नुवाकोटका नौं स्थानीय तहका २३ जना बेपत्ता भएको सूची रहेकोले सम्वन्धित स्थानीय सरकारले ति परिवारको जिविकोपार्जनका लागि कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए । किस्पाङ्ग, मेगाउँ गाउँपालिका र विदुर नगरपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहबाट नागरिकहरू द्धन्द्धको समयमा वेपत्ता भएको प्रतिवेदन नेपाल रेडक्रस सोसाईटी नुवाकोटसंग रहेको छ ।
नुवाकोट रेडक्रसका मन्त्री हरि श्रेष्ठले वेपत्ता भएका व्यक्तिको बारेमा थाहा पाउने गरी सहयोग गर्न जनप्रतिनिधिसंग आग्रह गरे । अंग्रेजी पात्रो अनुसार ३० अगस्टमा वेपत्ता भएकाहरूको सम्झनामा अन्तराष्ट्रिय दिवस मनाईदै आएको छ । यस अवसरमा शुक्रवार नुवाकोट रेडक्रसले विदुरमा कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा सहभागि जनप्रतिनिधि, संघिय सरकारका प्रतिनिधिले वेपत्ता परिवारलाई राहत पुग्ने गरी काम गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
काखीमुनीका मान्छेका कुरा नसुन्नु : पाण्डे
विदुर/नेकपा नुवाकोटका ईञ्चार्ज एवं पुर्व मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले प्राकृतिक श्रोत साधनको तस्करी नियन्त्रणका लागि नुवाकोटका प्रशासन र प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् ।
केही दिन अघि नुवाकोटमा भएको एक फरक कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले नेता, सरकार र ठुला मान्छेको आडमा प्राकृतिक श्रोता साधनको तस्करी गर्न प्रशासन र प्रहरीमा दवाव आउने गरेको सुनेको बताए । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेल र प्रहरी प्रमुख एसपी अविनारायण काफ्लेलाई कुनै पनि दवावमा बालुवा तस्करी गर्न नदिन निर्देशन दिए । ‘ठुलाबडाको काखीमुनीका मान्छे हुँ भन्दै फोन अउला सिडिओ सा’प एपपी सा’प, त्यस्ताको फोन आयो भन्दैमा खोलामा मेसिन हाल्ननदिनु, बरु हामीलाई भन्नुहोला, हामीले जानेका छौं’ पाण्डेले भने ।
यता, अबैध रुपमा खोलामा मेसिन प्रयोग गरी बालुवा निकाली रहेका तीन जनालाई बिहिवार साँझ नुवाकोट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तादी नदीमा प्रयोग गरेको मेसिन नियन्त्रणमा लिनेक्रममा प्रहरीलाई बाधा पु¥याएको भन्दै पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ ।
प्रहरीले खोलाको किनारमा फेला परेको स्काईभेटर सिक्रीले बाधेर फर्किएकोमा उक्त सिक्रि काटेर खोलाबाट मेसिनले बालुवा झिकीरहेको फेला परेको थियो । उक्त मेसिनलाई पुन नियन्त्रणमा दिँदा झगडा गर्न आएका तीन जना पक्राउ परेका हुन् ।
पक्राउ पर्नेहरूमा बिदुर नगरपालिका वडा नं. ५ का रबिन कुमाल, हेटौडा उप महानगरपालिका वडा नं. १४ का निरन आले मगर र सोही ठाउँमा अशोक आले मगर छन् । उनीहरू हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेको एसपी अविनारायण काफ्लेले बताए ।
यसै बीच, जिल्ला अदालत नुवाकोटबाट फैसला भई दोषि ठहर भएर फरार भएका एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार लिखु गापा ३ सुर्यमतीका राजु जर्गामगर पक्राउ परेका हुन् । उनलाई सवारी ज्यान मुद्दामा दोषि ठहर गरिएको छ । जिल्ला अदालतलले २०७५ साल भदौ २५ गते उनलाई एक महिना कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । उनलाई बिहिवार जिल्ला कारागार नुवाकोट चलान गरिएको नुवाकोट प्रहरीले जनाएको छ ।
चौघडा/जिल्लास्तरीय ११ औँ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम भएका विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गरिएको छ ।
त्रिभुवन त्रिशुली माध्यामिक विद्यालयमा गएको असार २२ र २३ गते उक्त प्रतियोगिता भएको थियो । प्रतियोगितामा लिखु गाउँपालिका प्रथम भएको थियो । गाउँपालिकालाई जिताउन सफल विद्यार्थीहरूलाई लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर ४ चौघडा स्थित क्षेत्रपाल माध्यामिक विद्यालयमा २३ जना विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गरिएको हो ।
गाउँपालिकालाई ११ औँ राष्ट्रपती रनिङशिल्ड प्रतियोगितामा प्रथम बनाउन योगदान पुराएको भन्दै थप हौसला प्रदान गर्न समाजसेवीहरू शैलेस श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा साइकल वितरण गरेका हुन् । विद्यार्थीहरूले कितावी ज्ञानको साथसाथै खेलको माध्यमबाट आफ्नो छुट्टै परिचय बनाउन चाहिरहेकोले उनीहरूको रुचीलाई मध्यनजर गर्दै हौसला प्रदान गर्न साइकल प्रदान गरिएको शैलेस श्रेष्ठले बताए ।
दाजुभाई शैलेस श्रेष्ठ र सन्तोष श्रेष्ठको आर्थिक व्यवस्थापनमा कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई दर समेत खुवाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक कृष्णबहादुर राइले जानकारी दिए । कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठले नेपालीहरूले मान्दै आएको अनेकौँ पर्वहरूको विशेषता फरकफरक रहेकोले त्यसको जर्गेना गर्न विद्यालयका विद्यार्थीलाई माध्यम बनाउदा प्रभावकारी हुने बताए ।
विद्यालयलाई कम्प्युटर प्रदान
विदुर/न्युजिल्याण्डको एक संस्थाले एजुटेक नेपाल मार्फत बिदुर नगरपालिकाको २ बिद्यालयलाई ४० थान कम्प्युटर उपलब्ध गराएको छ । बेल रिसर्च सेन्टरको समन्वयमा बिदुर नगरपालिकाको च्वाडि पब्लिक मावि र चन्द्रज्योती माबिलाई कम्प्युटर उपलब्ध गराको हो । दुई बिद्यालयलाई ४० थान कम्प्युटर प्रदान गरेको छ । कम्प्युटर हस्तान्तरण कार्यक्रममा बिदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले नगर भित्र रहेका सबै बिद्यालयलाई प्रबिधिमैत्री बनाउने लक्ष्य स्वरुप कम्प्युटरको लागी सहजिकरण गरेको बताए । च्वाडि पब्लिक माविका अध्यक्ष लक्ष्मण श्रेष्ठले कम्प्युटरले प्राबिधिक शिक्षामा सहयोग पुग्ने बताए ।
ऐतिहासिक सम्पदा निर्माणमा पनि उत्तिकै चासो
विदुर/राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञवालीले एतिहासिक र पुरातात्विक संरचनाको पुनःनिर्माण उत्तिकै प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
नुवाकोटको एतिहाँसिक साततले दरबारको परिसरमा भएको सम्पदा पुनःनिर्माण सम्बन्धि कार्यक्रममा एतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र पुनःनिर्माणको लागी पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बिशेष योजना बनाएर काम गरिरहेको उनले बताए । चिन सरकारले पुनःनिर्माण थालेको साततले दरबार यसको उदाहरण रहेको उनको भनाई छ ।
नेकपा नुवाकोट ईन्चार्ज महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नुवाकोटको एतिहासिक साततले दरबार क्षेत्रसँगै जिल्लामा रहेका अन्य पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण जरुरी रहेको बताए । यसका लागी स्थानिय सरकार, नागरिक र पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सहकार्य आबाश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले पुनःनिर्माणको नाममा मौलिक सम्पदा मासिदै गएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरे । सिमेण्ट र बालुवा प्रयोग गर्दा मात्रै संरचना बलियो हुने गलत सोच हटाउनु पर्ने तामाङले बताए ।
कार्यक्रममा विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले गुनासो बिवरण संकलनको अबधि थपिदा आफुलाई काम गर्न असहज भएको बताए । विदुर नगरपालिकामा पछिल्लो पटक संकलन भएको गुनासोबाट पनि बास्तबिक पिडितहरूको पहिचान गरी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पठाएको पण्डितले बताए ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शुसिल ज्ञवाली सहितको टोली पुरातात्विक सम्पदा तथा पुनःनिर्माणको अबस्था अबलोकन गर्न गएको आईतबार र सोवावार नुवाकोट बसेका थिए ।
स्कुलबाट फर्किदा खोलाले बगाएर वेपत्ता
विदुर/नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका–१ भाल्चेका सरोज घलेलाई सोमबार विद्यालयबाट फर्कदै गर्दा खोलाले बगाएर बेपत्ता बनाएको छ ।
फिकुरीस्थित प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक महानन्द यादवका अनुसार सोमबार किस्पाङ गाँउपालीका वडा नम्बर ३ मा बोडिङबाट फर्कदै गरेका नौ वर्षीय घलेलाई जानगन्दो खोलाले बगाएको हो ।
विद्यालयबाट फर्कदै गरेका तीन जना विद्यार्थीहरूमध्ये सरोजलाई बगाएर बेपत्ता बनाएपछि स्थानीयवासीको सहयोगमा प्रहरीले खोजतलास जारी राखेको छ । किस्पाङ गाँउपालीकाको वडा नम्बर १ बाट गाउँपालिकाको कार्यालयसमेत रहेको स्थान वडा नं ३ को काहुलेतर्फ जाने उक्त खोलामा पुल नहँुदा वर्षाको समयमा आउने बाढीले आवतजावतमा समस्या हँुदै आएको छ ।
उता, बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा भालुको आक्रमणबाट एक युवक गम्भीर घाईते भएका छन् । घाईते हुनेमा बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर ११ का प्रकाश तामाङ रहेको बताइएको छ । भालुको आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएका उनको काठमाण्डौको टिचिङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
सिडिसीको सामाजीक परीक्षण
विदुर/सामुदायिक बिकास केन्द्र (सिडिसी) नेपालले सामाजिक परिक्षण एवं साझा सभा कार्यक्रम शुक्रवार विदुरमा सम्पन्न गरेको छ ।
संस्थाले अघिल्लो बर्ष गरेको कार्यहरूको समीक्षा गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायणप्रसाद खतिवडाले गैर सरकारी संस्थाले गरेको काम प्रभाबकारी भए नभएको जनप्रतिनिधिहरूले अनुगमन गर्नु पर्ने बताए । अधिकांश गैससहरूले गरेको काम दिगो नभएको गुनासो आएकाले त्यसप्रति स्थानिय जनप्रतिनिधिहरू सजग हुनु पर्ने उनको भनाई छ ।
प्रदेश नं. ३ का सांसद कल्पना नेपालीले गैससहरूको कामका कारण कही भने परिवर्तन आएको स्मरण गरे । उनले केही गलत प्रवृत्तिका संस्थाहरूका कारण सिङ्गै सामाजिक संस्थाको अभियान दुषित भइरहेको बताए । सांसद नेपालीले सिडिसीको कामको भने प्रशंसा गरेका छन् । नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले स्थानिय तह देखि गैर सरकारी संस्थाहरूले गरेको कामको प्रगती बिवरण सार्बजानिक गर्नु पर्ने बताए । बिभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संघ संस्थाचहरू पारदर्शी र नागरिकहरू प्रति उत्तरदायी बन्नु पर्नेमा जोड दिए ।
सामुदायिक बिकास केन्द्र्रले नुवाकोटको शिवपुरी गापामा ११ हजार ६७० जनालाई खानेपानीको ब्यबस्थापन गरेको, लिखु र म्यागङ गापामा पारस्परिक जवाफदेहिता जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । रसुवाको नौकुण्ड र उत्तरगया गापामा पूर्णिमा परियोजनाको ‘होप’ कार्यक्रम पनि सिडिसीले सञ्चालन गरिरहेको छ ।
दैनिक बगिरहन्छ गेर्खु खोलाको डाइभर्सन
विदुर/गेर्खु खोलामा हालेको डाईभर्सन प्रत्येक दिन जस्तो बाढीले बगाउदै आएको छ । पोहोर पक्की पुल बाढीले बगाएपछि व्यक्तिको जग्गामा हालिएको डाइभर्सन यो पछिल्लो दुई साताको बीचमा छ पटक बगाई सकेको छ ।
निर्माण कार्य असाध्यै सुस्त गतमिा भइरहेको यो पुलका कारण स्थानीयहरू मर्मामा परेका छन् । विद्यालय जाने विदार्थीहरूलाई दिनहुँ सास्ती हुँदै आएको छ । मुख्य सडक खण्डमा रहेको यही खोल र अधुरो पुलका कराण नागरिकहरू सवारी साधन वारीपारी नै राखेर हिड्नु पर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । स्थानीयहरूले भने पुल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने वा डाइभर्सनलाई दिर्घकालिन रुपमा रहने गरी पक्की बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
तर, व्यक्तिको जग्गा केही समयका लागि मागेर डाइर्भसन बनाइएको कारण त्यहाँ स्थानीय संरचना तयार गर्न ठेकेदार कम्पनीलाई समस्या भएको छ । यही समस्या समाधानका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा सरोकारवाहरूको बैठक बसी आवश्यक प्रक्रृया अगाडी बढाउने निणर्नय भएको छ । गेर्खुखोला डाईभर्सनका कारण पीडित स्थानीयहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रकृया सुरु गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले निर्देशन दिएको छ । ब्यक्तिको जग्गा प्रयोग गरी डाईभर्सन बनाईएपनि उनीहरू जग्गा प्रयोग गर्न र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न बञ्चित हुनु न्यायोचित नहुने निष्कर्षका साथ नीजि जग्गाको क्षतिपूर्ती उपलब्ध गराउन सडक आयोजनाले अविलम्ब प्रकृया सुरु गर्न प्रजिअको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निर्णय गरेको हो ।
विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डित, नपाका वडा अध्यक्षहरू, सडक आयोजना र निर्माण कम्पनीका प्रमुखहरू समेत उपस्थित बैठकले गेर्ख‘खोलामा निर्माण भईरहेको पक्की पुलको प्राबिधिक परीक्षण गरी स्पान थप लगायत ‘रिभर ओरिएण्टेशन ब्रिज एक्सिस’ मेल खानेगरी यथाशक्य निर्माण सम्पन्न गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । सामान्य बर्षत हुँदा समेत खहरेखोलामा ठुलो बाढि आउने र डाईभर्सन बगाउने गरेको छ । गेर्खुखोलामा आएको बाढीले अस्थायी डाइर्भसन बगाएपछि सडक पटक पटक अबरुद्ध हुँदै आएको हो ।
नुवाकोटमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरण हुने
विदुर/नागरिकहरूको वैयक्तिक र जैविक सूचनालाई आधिकारिक रुपमा सङ्कलन गर्न मौलिक परिचय सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माणको लागी नुवाकोटमा बिवरण संकलन हुने भएको छ ।
गएको सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटमा भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र ब्यवस्थापन सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पाँचथर जिल्ला र सिंहदबार परिसरमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरण भएको र बाकी जिल्लामा छिट्टै हुने बताईएको छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले डिजिटल प्रबिधिमा जाँदा प्रभावकारी रुपमा जानुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरणको सेवा बिक्रेन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘विदुरबाट मात्रै नभई जिल्लाका अन्य स्थानबाट पनि तथ्याङ्क संकलन गर्ने र परिचय पत्र वितरण गर्ने अवस्था बनाउनर पर्यो’ प्रमुख सन्तमान तामाङले भने ।
आउने फागुन देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न सरकारले प्रतिघण्टा २० हजार कार्ड छपाइको योजना बनाएको छ । हाल प्रतिघण्टा ६ सय परिचयपत्र उत्पादन हुँदै आएकोमा सबै जिल्लामा वितरण शुरु गर्न मेसिनको क्षमता वृद्धिसहित प्रशासनिक र प्राविधिक व्यवस्थापनमा सरकार जुटेको हो । कार्ड उत्पादनको कार्य सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा हुँदै आएको छ ।
कार्यक्रममा विदुर नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु पण्डितले डिजिल प्रबिधि आएसंगै अब परिचय पत्र लिन झन्झटिलो नहुने बताए । उनले एउटै मानिसले २÷३ वटा नागरिकता लिईरहेकोमा राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरणको भएसंगै त्यस्तो कार्य नहुने बताए ।
व्यक्तिका वैयक्तिक र जैविक सूचनालाई आधिकारिक रुपमा सङ्कलन गरी प्रत्येक नागरिकलाई एकअर्कासँग मेल नखाने मौलिक परिचय नम्बर दिई बहुउपयोगी र आधुनिक प्रविधियुक्त राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई हाल अभियानकै रुपमा वितरण भइरहेको छ । यो परिचयपत्र पाएपछि नागरिकले सरकारी काम र सेवा लिनका लागि अन्य कागजात र परिचयपत्र बोकिरहनुपर्ने झन्झटको अन्त्य हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण बिभागका सुचना प्रबिधि प्रमुख शुभाष ढकालले जानकारी दिए ।
नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरण कार्य राष्ट्रिय अभियान भएकोले सरोकारवालाहरूले बिषेश चासो राख्नु पर्ने बताए । यो राष्ट्रिय अभियानलाई सम्पूर्ण स्थानिय तहहरूले सहयोग गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचय पत्रमा प्रत्येक नागरिकलाई एकअर्कासँग मेल नखाने गरि पहिचान सहितको बितरण गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, विकास व्यवस्थापन र राजश्व परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीलाई आबद्ध गरी महत्वपूर्ण सूचना औजारको रुपमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर र राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोग गर्ने यो नेपालका लागि नयाँ प्रणाली हो ।
कपिलदेव खनालसंग श्रृङ्खला २
कपिलदेव खनाल बाट श्रृङ्खला–१
गोरु विक्रीको विज्ञापन छपाउँदा
२०५६ सालको सुरुको समयतिर हुनुपर्छ, गाउँभरीका सहेलीहरुसंग दैनिक भेटघाट गर्न र आफ्ना कुराहरु साटासाट गर्नको लागि बोहोरेको चौतारोमा जम्मा हुने गथ्र्यौ । १५ मिनेट वरपरबाट हिडेर आउने हामीहरुसंग भेटघाट र छलफलमा एजेण्डा भने केही हुँदैन थियो । कट्टुको खल्तीभरी मकै र भटमास बोकेर आउने हामी दिउँसो स्कुलमा भएका पढाई इतरका गफ र शिक्षकहरुले हामीलाई भन्दा बढी केटीहरुलाई गर्ने ‘केयर’लाई मनोरञ्जनात्मक हिसावले व्याख्या गरेर साँझ पाथ्र्यौ र घर फर्कन्थ्यौ । यही क्रममा एक दिन एक जना अपरिचित मान्छे हाम्रो कान निमोठ्न आइपुगे । गाउँकै भएर पनि हामीले नचिनेको दाई हुनुहुँदो रहेछ । विदुर बस्ने अधिवक्ता गणेशप्रसाद खनाल त्यस बेला हाम्रो अगाडी अर्तिउपदेशका भाषा बोलिरहनुभएको थियो । केही साथीहरु स्कुलको मास्टरको झल्को आयो भन्दै उठेपछि उहाँको कुरा छाडेर बीचैमा भागेका थियौ ।
त्यसको केही दिन पछि फेरि गाउँ देखापरेका उनै दाई झोला भरी पत्रिका बोकेर आएका रहेछन् । यो पाली भने हामीलाई नौलो अनुभुती भइरहेको थियो । अनुभुती यो अर्थमाकी हामी प्रायः ले सायदै पढेका थियो होला पत्रिका । त्यहाबाट सुरु भएको कुराकानीको क्रममा गाउँमा पत्रिका प्रकाशन गर्ने टुङ्गोमा पुग्यौ । तर पत्रिका चाँही भित्तामा टाँस्ने । अहिले सम्झदा दुई दिन लगाएर भित्ते पत्रिका लेखेर गोवरले चौतारा वा पाटीपौवामा टाँस्ने कुरा आफैमा रोचक अनि हाँसो उठ्दो कुरा रहेछ ।
त्यस बेला हामीमा पत्रिका प्रकाशन गर्ने विषयले खुव उर्जा भरेको थियो । प्रायः सुन्ने गरेको रेडियो नेपालमा समाचार भन्दै जाँदा वाचकले भन्ने गरेका केही वाक्यहरु हामीलाई राम्रैसंग याद हुन्थे । जस्तो की, समाचार भन्दै गएपछि ‘....उक्त कार्यक्रम क्लवका अध्यक्ष ऋषी धमलाको सभापतित्वमा सम्पन्न भएको थियो’ अनि स्थानीय समाचार बुलेटिनमा बज्ने नुवाकोटको समाचारमा ‘....निर्माण सम्पन्न भएको हाम्रा स्थानीय सम्वाददाता ध्रुवकुमार रावलले जनाएका छन्’ हामीलाई खररनै आउथ्यो । हामी त्यत्ती बेला पत्रकार भनेका यस्तै नाम होलान् भन्ने बुझ्थ्यौँ । अब हामीसंग पत्रकार बन्ने रहर हुर्किसकेको थियो ।
नत पत्रकारिताको जानकारी, न पत्रिकामा आवश्यक सामाग्रीको न्युनतम ज्ञान नै थियो हामीसंग । गणेश दाईले बताएको र पत्रिकामा पढेको आधारमा हामी तम्सियौ भित्ते पत्रिका प्रकाशन गर्न, त्यो पनि साप्ताहिक रुपमा । साच्चै नै काम गर्ने समयमा भने धेरै साथीहरुले अनिच्छा देखाए । मसंग दुई जना भाइहरु सागर र बैकुण्ठ मात्र बाँकी रहे । अन्य साथीहरु चाँही पत्रिकाको जिम्मा हाम्रो काँधमा भन्दै उनीहरु उबडखाबड परेको जमिन सम्याएर भलिवल खेल्ने मैदान बनाउन थाले ।
यसलाई हाम्रो समुह (जो पत्रिका पट्टी भाग लगाइएको थियो)ले स्विकार गरेको थियो । चौर सम्याएर सक्किएको भोलिपल्ट पत्रिका प्रकाशन गर्ने र खेलमैदान निर्माण गरेको समाचारलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो योजना थियो । भयो पनि त्यसै । हामीले जेष्ठ २७ गते शनिवार चाँदनी नाम राखेर साप्ताहिक भित्रे पत्रिका प्रकाशन सुरु ग¥यौ । प्रधान सम्पादकमा मलाई साथीहरुले छानेका थिए । हाम्रो परिभाषामा प्रधान सम्पादक भनेको चाँही लेख्ने कुराहरु जुटाउने, पत्रिका लेख्ने र टाँस्नको लागि गोवर र पत्रिका लैजाने मान्छे भन्ने थियो । सम्पादन मण्डलमा रहेकोहरुले चाँही गाउँघरमा के भइरहेको छ सुन्ने र थाहा पाउने कोशिस गर्थे । त्यसरी थाहा पाएको खबर पत्रिकामा लेखिनु भन्दा पहिल्यै धेरैलाई थाहा नहोस् भनेर सम्पादक मण्डलका साथीहरु अन्य साथीसंग कमै बोल्ने गर्ने । पत्रकारिता र पत्रिकाको विषयमा त्यस बेला हामीसंग भएको आफ्नो छुट्टै बुझाई र प्रयोगलाई सम्झिदा आजभोलि हाँसो उठ्छ ।
पत्रिकालाई चार वटा लेखेर फरक फरक चार स्थानमा टाँस्ने गरेका थियौ । साथीहरु बरोवरी भेला हुने बोहोरेको चौतारो, पढ्नको लागि जाने विज्ञान माविको भवन, बाहुनबेशीको सृजनशील सहकारी र आप्रँह बजारमा हामीले पत्रिका टाँस्थ्यौ । त्यस मध्ये विशेष चर्चा र पत्रिकाको प्रभाव चाँही आप्रँहमा टाँसेकोले बटुल्ले गरेको थियो । आप्रँह त्यस बेला क्षेत्र नं. २ को प्रमुख व्यापारीक केन्द्र थियो र त्यहाँ मानिसको चहलपहल सदरमुकामको भन्दा कम हुदैन थियो । आजभोलि सम्झिदा अचम्म लाग्छ मलाई, त्यत्तीका मान्छेहरु कहाँ गए होलान् ? आजभोलि त पुरै–पुरै गाउँ नै रित्तो छ ।
पहिलो अङ्क प्रकाशनमा हामीलाई जम्मा जम्मी छ रुपैयाँ लागेको थियो । हप्ताको छ रुपैयाँ पत्रिकाको लागि भनेर माग्ने वा जम्मा गर्ने हामीसंग श्रोत थिएन । पहिलो अङ्क आउँदासम्म हामीलाई कसैले पनि कुनै प्रतिक्रृया दिएका थिएनन् । जब हामीले दोश्रो अङ्क प्रकाशन गरेर चार स्थानमा टाँस्यौ, त्यस पछि हाँस्ने मान्छे पनि निस्किए र स्यावासी दिने मान्छे पनि निस्किए ।
भयो चाँही के भने असार २ गते प्रकाशन भएको उक्त पत्रिकमा गोरु विक्रीको विज्ञापन छापिएको थियो । मेरो घर तलका ठुलाबा (नाताले हजुरबा पर्ने तर हामी ठूलाबा भन्छौ) गोरु विक्री नभएर चोट्टे परेका बसिरहनु भएको रहेछ । मैले गोरु बिकाउने र त्यस बापत उहाँले मलाई १० रुपैयाँ दिने शर्त मारेर हिडेको थिएँ । मेरो दाउ पनि पत्रिकामा विज्ञापन गर्ने र गोरु विक्रीको साथै पत्रिकाको नाम पनि फिजाउने थियो । गोरु विक्रीको लागि आफ्नो नाम ठेगाना र मोल सहितको विवरण लेखेर बजारमा टाँसेको थाहाँ पाएपछि ठुलाबाले झण्डै मारेका थिए ।
दुई दिन पछि ति नै ठुलाबा हसिलो मुद्रामा भेटिए । बिहान मात्रै गणेस्थानका मान्छे आएर आठ हजारमा हल गोरु किनेर लगेछ । ‘नाती बजारमा टाँसेको पत्र पढेर गोरु किन्न आएछन्, जाती कुरा रहेछ यो त’ ठुलाबाले भनेको वाक्य म अझै सम्झन्छु । उहाँले मलाई २० रुपैयाँ पनि दिनुभएको थियो । १० रुपैयाँमा भएको सहमतीमा प्रसन्नताले अर्को १० रुपैयाँ थपियो । उहाँ खुसी हुनुभएर थपिदिनु भएको रे ! त्यो २० रुपैयाँले कागज र कार्वनका साथमा १२ थरी रङ्ग भएको साइनपेनको प्याकेट नै किने जुन रङ्ग पछिसम्म पत्रिका रङ्गाउन काम आएको थियो । कार्वन किनेपछि मलाई चार वटा पत्रिका दुई पटकमै तयार गर्न सजिलो भएको थियो ।
पत्रिकामा लेखेर नै गोरु विक्री भएको हल्लाले नौ गाउँ हल्लाइसकेको रहेछ । कविलासबाट दिदी घर आउनुहुँदा समेत भन्नुभएपछि म अलमल्लमा परेको थिएँ । त्यस बेलामा पत्रिका पढेर सल्लाह दिने र यस्तोउस्तो लेख्नु पर्छ भन्ने अग्रजहरुको संख्या ह्वात्तै बढ्न थाल्यो । दोश्रो अङ्कमै प्रकाशन भएको गोरु विक्रीको सूचनाले चाँदनी भित्ते पत्रिका कसको र कहाँको हो भनेर चिनाई रहनुपरेन । त्यसबेला स्थानीय समाचारहरु लेखेर भित्तामा टाँस्दा जान्नेसुन्नेहरुले राम्रो काम हो भनेर धाप मार्थे । तर पछाडी परेपछि हाँसेर उठाउँदा पनि रहेछन् । यो घटना कसरी प्रमाणित भयो भने एकजना भण्डारी बाजेले ‘तिम्रो अखवरमा लेखेर गोरु विक्री भयो रे मेरो खेत बेच्नु थियो’ भने ।
खेत विक्री भएपछि मात्रै पैसा दिने शर्तमा उनको खेत विक्रीको विज्ञापन छापियो । त्यो अङ्क आठ÷नौ तिर प्रकाशन भएको हुुनुपर्छ । उसै त थोरै जग्गा भएको ठाउँ बाहुनबेशी त्यसमा पनि भण्डारीहरुको पुरानो थाकथलो । त्यसबाट पनि चार÷पाँच रोपनी जग्गा विक्रीका लागि सूचना आएकोले पढ्नेहरुमा तरङ्ग पैदा भएछ । त्यसको पछिल्लो शनिवार म पत्रिकाको नयाँ अङ्क टाँसनको लागि हातमा गोवर लिएर हिड्दै थिएँ, एक जनाले अधबैशे मानिसले बाहुनबेशीको कुलोमा (अअिले पिच सडक भएको ठाउँ) नराम्रोसंग हकारे । कुरा बुझ्दै जाँदा पत्रिकामा गलत सूचना आएको कारण म हप्पकी खाँदै रहेछु । कुरा के रहेछ भने जग्गा विक्रीका लागि सूचना छपाउने भण्डारी बाजेले आफुले सूचना नपदएको र जग्गा बेच्ने थाहै नभएको हल्ला चलाएन् । भोक्किएर उनको घर पुग्दा ‘तिम्रो पत्रिका कत्तिजनाले हेर्दा रहेछन् भनेर जाँचेको नी, कहाँ जग्गा बेच्नु’ पो भन्दै थिए बाजे त । तर विज्ञापन प्रकाशन बापतको भनेर पाँच रुपैयाँ चाँही लिई छाडेँ ।
पत्रकारिताको विद्यार्थी भएपछि मैले गाउँ रहँदा गरेको कार्यलाई विस्तारै बुझ्न थाले । त्यसलाई पछिल्लो विश्वमा विकास पत्रकारिताको नामले बुझिदो रहेछ । विशेष गरी विकसित राष्ट्रहरुमा अपनाइने त्यस्ता पत्रकारिताका विधि सर्वाधिक लोकप्रिय छन् । नेपालमा भने विकास पत्रकारिताको अभ्यास सुरु हुने चरणमै छ । त्यसैलाई बढावा दिनका लागि सरकारले ल्याएको गाउँ गाउँमा रेडियो सञ्चालनको अवधारणा पनि लगभग असफल भएको छ । एफएम स्टेशनहरु गाउँ गाउँमा सञ्चालनको लागि स्विकृति दिने सरकारको योजनलाई राष्ट्रिय रुपमा भन्नुभर्दा पछिल्लो समय माफियाहरुले असफल बनाएका छन् । अनुमती भन्दा बाहिरको स्थानमा बढी क्षमताको रेडियो सञ्चालन गर्दा अहिले सरकार अनुमती पत्र दिनलाई समेत हिचकिचाएको अवस्था छ ।
म रेडियोको यो प्रसङ्ग त्यही गोरु विक्रीको सूचनामा लगेर जोड्न चाहान्छु । एफएम रेडियो भनेको एउटा समुदायको लागि वा भनौ सानो ठाउँका लागि सञ्चालनमा ल्याइने आमसञ्चारको एउटा सशक्त माध्याम हो । नेपालमा विकृत रुपमा विकास भएको बढी क्षेत्र समेट्ने रेडियोहरु एफएम रेडियोको अवधारणा भन्दा बाहिर छन् । बास्तव मै एफएम रेडियोहरुले गर्ने भनेको आफ्नो सानो क्षेत्र निर्धाण गरेर त्यस गाउँमा हुने जस्तोसुकै गतिविधी र कार्यको हल्लाखल्ला गरिरहनु हो । मलाई त के लाग्छ भने, सामुदायिक रेडियोहरुले स्थानीय स्तरका जेजस्ता कुराहरु पनि प्रशारण गर्नुपर्छ । त्यो छिमेकमा हुनलागेको पुजाआजा, तिथिश्राद्धको निम्तो पनि किन नहोस् । गोरु र खेत विक्रीको सूचना प्रशारण त अझ बेग्लै कुरा ।
९ भदौ,२०७६ अंकको सम्पादकिय
तत्काल नियन्त्रण गर
भारत सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी) ले युनाइटेड नेशन्स अफिस फर प्रोजेक्ट सर्भिसेस (युएनओपिएस) मार्फत नुवाकोटमा सञ्चालन गरिरहेको भुकम्प पछिको पुननिर्माणमा अनियमितता छ । कार्यक्रम सञ्चालनको सुरु अवधि देखिनै प्रक्रृया भन्दा बाहिर रहेको यो परियोजनालाई आयोजना कार्यान्वय इकाईले पटक पटक सचेत गराउँदा अटेर गरेर काम गरिरहेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । ‘यूएनडिपीको कार्यक्रम’ भन्दै स्थानीय सरकार, नागरिक, लाभग्राही र सरोकारवालालाई वेवास्था गरिरहेको परियोजनाले करोडौं रुपैयाँ भुकम्प पिडितको नाममा नुवाकोटमा खर्च गरिरहेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा यसको कार्य प्रगती निराशायुक्त मात्रै छ ।
भारत सरकारले भुकम्प गए लगत्तै नेपाललाई सहयोग गर्न प्रतिवद्धता जनाएको रकम यही परियोजनामा खर्च भइरहेको छ । यसको प्रतिफल नकारात्मक रहेको सरकारी दस्तावेज नै भेटिएको छ । यसले युएनओपिएस ‘लगाम विनाको घोडा’ जस्तै देखिएको छ । कर्मचारी छनोट प्रक्रृयादेखि बिवादमा आएको यो परियोजना र योसंग जोडिएको संस्था युएनओपिएसले कुन भुगोलमा कसरी काम गरिरहेको छ भन्नेसम्मको प्रष्ट विवरण नुवाकोटमा छैन । स्थानीय सरकारहरूले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरूको कार्यक्रम र क्रियाकलाप प्राप्त नहुनुले यस भित्रको ‘अर्कै खेललाई’ प्रष्ट पारेको छ । नुवाकोट जिल्लामा अधिकांशले घरको नक्सा तयार गरेर निर्माण कार्य थालेपछि घरको नक्सा र घर बनाउने परामर्श दिनका लागि सञ्चालन भएको यो परियोजनाको उपाध्यता उत्ति बेला नै कम देखिएको थियो ।
अझ परियोजना सञ्चालनको यो अवधिमा युएनओपिएसले देखाएको ब्यवहार, शैली र कार्यले चालू परियोजना अर्थहिन रहेको पुष्टि गरेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि यो कार्यक्रम नुवाकोटको नाममा सञ्चालन भइरहेर कमजोर घर निर्माणमा थप काम गर्न दिनु सरोकारवाला पक्षको कमजोरी मात्रै हो । स्थानीय सरकराले यसले गरिरहेको कार्यक्रम र गतिविधिहरूको अनुगमन, छानविन र नियन्त्रण गर्नु जरुरी देखिएको छ । होइन भने आयोजना कार्यान्वय इकाईले लेखे जस्तै नुवाकोटमा असुरक्षित घरको तथ्याङ्कमा मात्रै बृद्धि हुनेछ ।
▼ September 1 - September 8 (14)
युनोप्सको हेलचेक्र्याई, ८०० घरधुरी लाभग्राही सूचीम...